KITRA FOKONTANY : Hatao ny sabotsy izao ny lalao famaranana ny top foot telma eto Mahajanga
Fokontany 21 amin’ireo 26 misy eto ambonivohitr’i Mahajanga no nandray anjara nandritra ny roa tokombolana tamin’ity hetsika fandraisana an-tanana ny hoavin’ny tanora ity, izay nokarakarain’ny kaominina sy ny mpiara-miombon’antoka aminy ary ny tambajotra telma ity. 15 décembre 2017
Salan-taona 18 ka hatramin’ny 25 ireto mpilalao baolina kitra eny anivon’ny fokontany ireto, izay niady ny omby mifahy avy amin’ireo mpikarakara, koa dia izao tojo amin’ny tsotsorimamba hisarahana izao ny ekipan’Ambondrona sy Amborovy. Atao ny lalao famaranana eo amin’izy roa tonta ireto ao amin’ny kianjan’ Alexandre Rabemanjara ny tolakandron’ny sabotsy faha 16 desambra ho avy izao.
Amin’ny maha hetsika natokana ho an’ny tanora azy ity dia horavahana soradihy isankarazany ary hofaranana amin’ny fandihizana na discothèque hatramin’ny 09 ora alina io lalao famaranana io, hoy ny tompon’andraikitra hatrany. Hisy koa ireo fanomezana maimaimpoana avy amin’ny telma ho an’ireo arivo tonga voalohany ao amin’ity lalao famaranana ny kitra fokontany ity sy ireo loka avy amin’ny mpikarakara ho an’izay ekipa mpandresy.
Tanjona dia ny hanabe voho ireo tanora eny anivon’ny fokontany ka mba tsy hironan’izy ireo amin’ireo karazana zava-mahadomelina, hoy i Vincent sy Zo mpandrindra ny lalao. Marihina fa ho avy hanafana io lanonam-pamaranana io koa ny tarika Wawa junior na i Judicael.